devolo Multiroom WiFi Kit 500 +, nweta ezigbo ntanetị n'ịntanetị | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ ụlọ inwe ebe ihe mgbaàmà WiFi sitere na rawụta anyị anaghị eru. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ọtụtụ (site na ngwa ndị ọzọ na-egbochi nnyonye anya na oke mgbidi ma ọ bụ na rawụta anyị enweghị ike zuru oke). Bụrụ na ọ nwere ike, ruo oge ụfọdụ anyị nwere ihe a maara dị ka PLC na ahịa. E nwere ụdị dị iche iche, mana ikekwe nke kacha gbasaa taa bụ ndị na-eji netwọkụ eletrik ụlọ anyị ebugharị mgbaàmà ịntanetị na ya. Na ngwọta kachasị ọhụrụ site n'aka onye nrụpụta devolo bụ Multiroom WiFi Kit 550 +.
Ngwunye ahịa ahụ nwere transmitter na ndị nnata abụọ nke ị nwere ike idowe ebe ọ bụla n'ụlọ gị - ma ọ bụ ọfịs- nke ị ga-eji jikọọ ngwa ọ bụla chọrọ njikọ Internetntanetị. Na mgbe anyị kwuru otu egwuregwu anyị na-ekwu ọ bụghị naanị kọmputa, kama mbadamba, smartphones, consoles, Smart TV, wdg. Iji devolo Multiroom WiFi Kit 550 + ị gaghị enwe ike iguzogide ihe ọ bụla.
N'otu aka ahụ, nwụnye na inye ndị ọrụ PLC ndị a dị egwu ọ dị nnọọ mfe. Onye na-enyefe ya, otu n'ime kọmputa ndị ngwugwu ahịa ahụ nwere, ga-ejikọ na netwọk eletriki na rawụta nke na-enye anyị ohere ịntanetị. You ga-ekesa ndị ọzọ PLCs - ma ọ bụ tinye ha— n'ime ụlọ ebe ị chọrọ njikọ na Network.
N'otu aka ahụ, na dị ka anyị gwara gị na mbụ, na devolo Multiroom WiFi Kit 550 + ọ ga - enye onye ọrụ ohere ijikọ site na WiFi — ọ na - eme dịka ihe ntugharị nke ihe mgbaàmà mbụ- yana ị nwere ike ijikọ akụrụngwa site na eriri. Ma ọ bụ na n'akụkụ ala ị ga-enwe oghere Ethernet. Ikekwe nke a bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ndị chọrọ njikọ iji kpọọ na ịntanetị ma ọ dịghị ọsọ ọsọ na-eme nchọgharị. Dika ekwuru na akwukwo akuko, PLC Kit a gha adi na izu ndi na abia, n’agbanyeghi na egosighi onu ahia ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » devolo Multiroom WiFi Kit 500+, nweta ezigbo ntanetị ịntanetị n'ụlọ